Omelette broccoli sy karaoty | Recipe ao an-dakozia
Omelette broccoli sy karaoty
Toñy Torres | | Resety legioma, Resipeo mahasalama
Androany no itondrako anao izao omako broccoli matsiro sy salama, safidy tsara indrindra ho an'ny sakafo hariva maivana sy mahasalama ary mahafa-po. Fa ankoatr'izay, omelette anana ity dia voaomana ao anatin'ny minitra vitsy ary tsy mila fahaizana mahandro tena. Noho izany dia mety amin'ny olona tsy manam-potoana firy, na mpianatra na ho an'ireo rehetra tonga amin'ny alina nefa tsy mila na inona na inona.
Matetika dia mandreraka ny fanomanana sakafo hariva Ho an'ny ankamaroan'ny fianakaviana, aorian'ny havizanan'ny harerahana mandritra ny tontolo andro, iza no maniry hanomboka hanomana lovia be pitsiny? Na izany aza, zava-dehibe ny mandany minitra vitsy amin'ity sakafo ity, satria tsy tokony hataontsika tsinontsinona ny fahasalamantsika amin'ny fandaniam-potoana handrahoana sakafo, indrindra raha misy zaza ao an-trano. Raha tsy misy resaka intsony dia midina any an-dakozia isika!
Karazan-tsakafo: sakafo atoandro
Atody 4 habe L
Voalohany, handeha hodiak'ireo karaoty isika, manasa tsara ary mitahiry.
Manaraka izany dia esorinay ireo rantsankazo broccoli ary mandalo ny jet jetn'ny rano mangatsiaka isika.
Izahay dia manisy vilany ao anaty afo miaraka amin'ny rano ary rehefa mafana kely dia ampahafantarinay ireo karaoty.
Avelao izy hahandro mandritra ny 15 minitra ary aorian'io fotoana io dia ampianay koa ireo florets broccoli.
Andrahoy mandritra ny 7 na 8 minitra eo ho eo vao kobanina.
Atsofohy amin'ny rano mangatsiaka ny legioma mba hampitsaharana ny fahandroany.
Ankehitriny, hofainay ho karaoty manify ny karaoty.
Esorinay ny tahon'ireo broccoli ary tapatapantsika.
Ao anaty vilia iray dia kapohina ny atody ary asio sira kely.
Afangaro amin'ny atody sy sira ny legioma mba hanandrana.
Farany, manamboatra lapoaly tsy miraikitra amin'ny diloilo oliva virijina izahay.
Izahay dia manamboatra ny tortilla mandra-pahatongan'ny fihodinana sy ny fiomanana tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety legioma » Omelette broccoli sy karaoty
Akorandriaka feno sôkôla
Pasta misy epinara sy akoho